15% Off Packages အသေးစိတ်
ပရိုမိုးရှင်း Victoria Hospital
“ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်တစ်ပါး” ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်လေးအတိုင်း အမြဲစိတ်နှစ်လုံးချမ်းသာ ပျော်ရွှင်နေဖို့ ၊ ကျန်းမာရေးကောင်းကောင်းနဲ့ ဘဝကို ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ အတွက် Victoria Hospital ရဲ့ General Medical Check-up Packages (အထွေထွေကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုများ) ကို 15% Discount နဲ့အတူ စစ်ဆေးနိုင်ပါပြီ …
General Medical Check-up Packages များကတော့ ….
-	Daisy Package ( အသက်အရွယ်မရွေးစစ်ဆေးနိုင်သော အခြေခံကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း)
-	Iris Package ( အသက်လေးဆယ်နှစ်အောက် အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း)
-	Lily Package ( အသက်လေးဆယ်နှစ်အထက် အမျိုးသားများအတွက် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း)
-	Jasmine Package ( အသက်လေးဆယ်နှစ်အထက် အမျိုးသမီးများအတွက်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း)
-	Tulip Package ( ဇနီး မောင်နှံများအတွက် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း)
အစရှိတဲ့ General Medical Check-up Packages (အထွေထွေကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုများ) ကို 15% Discount နဲ့အတူ ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်နိုင်ပါပြီနော် …
Victoria Hospital ဟာဆိုရင်တော့ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီ စက်ကိရိယာ များနှင့် လူနာများအား စနစ်တကျ ကုသပေးသည့်အပြင် ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်ကြီးများကလည်း ဂရုတစိုက် အလေးထား ကြည့်ရှုပေးတာကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူပြုစေရုံသာမက စိတ်ကျေနပ်မှုကို အပြည့်အဝပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
အမြဲထာဝစဉ် စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာနေစေဖို့ “ ယုံကြည်စိတ်ချရသော အရည်အသွေးပြည့်ဝသည့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုရယူလိုသော မိသားစုများရွေးချယ်ရာ ဝိတိုရိယဆေးရုံပါ ”
ဆိုတဲ့ စကားလေးအတိုင်း ကျန်းမာရေးအတွက်အထောက်အပံ့ရယူလိုတယ်ဆိုရင်တော့ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ Victoria Hospital (ဝိတိုရိယ ဆေးရုံ) ကိုသာရွေးချယ်လိုက်ပါနော် ….
အထက်ကဖော်ပြပေးထားတဲ့ Package လေးတွေကို 15% Discount နဲ့စစ်ဆေးမူခံယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အခုစာမျက်နှာရဲ့ အပေါ်က “ Use Now” ခလုပ်လေးကိုနှိတ်ပြီးတော့ ကျလာတဲ့ “Success” စာမျက်နှာလေးကို သက်ဆိုင်ရာ ငွေရှင်းကောင်တာမှာ ငွေမရှင်းမှီပြသပြီးတော့ရယူနိုင်ပါတယ်..
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် 099 69910115, 09969910128 ကိုရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်…
Promotion Period - 15th.Oct.2019 - 15th.Jan.2020
Victoria Hospital ဆိုင်
No.68, Taw Win Road,9Mile, Mayangone Township
ဖုန်းနံပါတ် : 0919666141
Ends Wednesday, July 15, 2020